Sina DASQUA Manisy marika boaty fanomezana vahaolana miendrika Black Precision miaraka amin'ny Square Rivers + Kianja afovoany + Scriber + Demonstration + fanamboarana gazy sy orinasa | Dasqua
DASQUA manisy marika boaty fanomezana vahaolana miendrika Black Precision miaraka amina kianja aorina + Kianja afovoany + mpanoratra + fampisehoana + fanoratana
Ny fitaovana fandrefesana mainty fanomezana rehetra dia namboarin'ireo milina CNC. Raha ampitahaina amin'ny milina fanodinana nentim-paharazana dia miantoka ny fahamendrehana sy ny fitoviana ambony kokoa ny CNC. Izy io koa dia mampanantena ny vokatra tsirairay miaraka amina kalitao sy fenitra avo lenta.
Izy io dia vita amin'ny coating anodized mainty, izay teknolojia fitsaboana alimina farany ambony. Ary manolotra fiarovana amin'ny harafesina fanatsarana ny vokatra tsirairay alohan'ny dingana farany amin'ny sokitra farany, ary miantoka ihany koa ny fiarovana fanoherana ny harafesina.
Voasokitra tamin'ny laser
Ny marika rehetra dia voasokitra tamin'ny laser ho an'ny tena marina indrindra. Ity fanamarihana laser ity dia manome ny marimarina kokoa ho an'ireo mpampiasa, indrindra raha ampitahaina amin'ny fomba nentim-paharazana miorina amin'ny lasitra.
Mandefasa mailaka aminay Fisarahana Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa
Anaran'ny vokatra: boaty fanomezana fanomezana marindrano Black Precision
Item isa: 1804-1405
Warranty: roa taona
● CNC nasiana masinina
● Toeram-panala mainty
● Voasokitra tamin'ny laser
● Mifanaraka tanteraka
Nisafidy ny fandrefesana sy fantsom-pandrefesana marobe vaovao namboarina tamin'ity sity ity izahay hihaona amin'ny fampiharana samihafa. Ary koa ny fandrefesana afovoany matihanina dia ampiasaina amin'ny metaly sy hazo. Ny kianja rafter sy ny kianja mitambatra dia be mpampiasa amin'ny mpandrafitra matihanina sy mpampiasa DIY. Ny farany dia manampy penina scriber 1pc ao anatiny, izay ampiasaina amin'ny takelaka fitaratra, keramika, hazo ary vy.
Fanamafisam-peo, fiasana vy, fanamboarana fiara, fiasana hazo, sns.
Tombony ho an'ny DASQUA
• Ny fitaovana avo lenta sy ny fizotry ny milina marina dia miantoka ny kalitaon'ny vokatra;
• Ny rafitra QC iray azo zahana dia mendrika ny atokisanao;
• Ny fitantanana trano fitehirizana sy lojika mahomby dia miantoka ny ora fanaterana anao;
• Fiantohana maharitra roa taona no mahatonga anao tsy hanana ahiahy any aoriana;
Inona no ao anaty boaty fanomezana
1. Kianja Rsequ * 1
2. Kianja afovoany * 1
3. Scriber * 1
4. Fampisehoana fiasa miasa * 1
5. Fanaraha-maso Multi-Function * 1
Tsara indrindra Mpivarotra
Fitaovana fandrefesana avo lenta an'ny DASQUA 6 Inch / 150m ...
DASQUA High Precision Satin Chorme-vita vita ...